WAR DEG DEG AH:Wadada u dhaxaysa Garowe & Tukaraq oo go’an Iyo Madaafiic xoogan oo dhacaysa
LAASCAANOOD(P-TIMES)- Wararka Warsidaha Puntlandtimes.com uu hada ka helayo deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa sheegaya in xiisad dagaal oo hor leh laga dareemayo deegaankaasi.
Xiisadani dagaal ayaa timid kadib markii saaka iyo haatan ay Somaliland madaafiic dhowr ah ku riday dhanka ciidamada Puntland, waxaana la sheegay in Puntland dhankeeda iyaduna ay jawaab celin ka samaysay madaafiicdaasi.
Gaadiid badan iyo madaafiicda goobta dagaal ayaa lagu arkayaa jiidaha hore ee deegaanka Tukaraq, waxaana Somaliland ay haatan wadaa qorshe dagaal oo ka dhan ah Puntland.
Xoggo hoose oo ay heshay Puntlandtimes.com ayaa sheegaya in saraakiisha ciidamada Somaliland amar lagu siiyey tagitaanka deegaano hor leh, waxaana deegaanada u qorshaysan Somaliland in ay qabsato kamid ah deegaanka Faliidh Yaale ee gobolka Sool iyo deegaano kale oo badan.
Madaafiicda saaka ka bilaabmatay jiidaha Tukaraq ayaa sababtay in la gooyo dhamaanbta wadada isku xidha magaalada Garowe ee caasimada Puntland iyo deegaanka Tukaraq, kadib dhaq dhaqaaqyo ciidan iyo diyaar garow dagaal oo ka bilaabmay deegaankaasi.
Ciidamada Puntland ayaa dhankooda ka gaashaantay weerar kasta oo kasoo wajaha Somaliland, waxaana xiisada ka taagan Tukaraq ay sababi kartaa dagaal hor leh oo ka dhaca deegaankaasi kaas oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo Somaliland.
Deegaanka Tukaraq ayaa marar kala duwan ay dagaalo ku dhex mareen ciidamada Puntland iyo Somaliland, waxaana dagaaladii ka dhacay ay sababeen khasaarayaal kala duwan.